China maviri-mavhiri Akangwara Chigadzirwa BT-320 fekitori nevatengesi | Tbit
Maviri-mavhiri Akangwara Chigadzirwa BT-320
BT-320 iBluetooth yakangwara alarm alarm ye e-bhasikoro. Iyo terminal ine akawanda mabasa akadai seyemagetsi kukiya kuburitsa, 433M iri kure controller, vibration kuona, beep alarm, nhare yekushandisa kudzora e-bhasikoro, kuswedera kwekuona kwekuvhura, mileage Statistics, mafambiro ekugovana uye manhamba, controller kutaurirana uye alarm, e-bhasikoro kuzviongorora uye mamwe mabasa.
- Inductive uye kiinura
- YeBluetooth yekudzora mota
- Imwe-tinya kutanga
- Chigaro chakakiyiwa
- Kuongorora kukuru kwedata
- Tsigira Mall Docking
(64.02 ± 0.15) mm × (44.40 ± 0.15) mm × (18.7 ± 0.15) mm
Inzwa Zvinotaurwa voltage siyana
Chikamu chisina mvura
ABS + PC, V0 moto kuchengetedza giredhi
Kunonyanyisa kugamuchira daro
30m, Vhura nzvimbo
Central Frequency Nzvimbo
Rondedzero yebasa Zvimiro
Kiya Mune Lock mode, kana iyo terminal ichiona chiratidzo che vibration, inogadzira alarm yekudengenyeka.
Kiinura Mune mode yekuvhura, chishandiso hachizoone kutinhira, asi chiratidzo chevhiri uye chiratidzo cheACC chinoonekwa. Hapana alarm ichagadzirwa.
Vibration kuona Kana paine kudedera, mudziyo waizotumira alarm, uye buzzer kutaura-kunze.
Wheel kutenderera kuona Iyo kifaa inotsigira kuwanikwa kwevhiri kutenderera. Kana iyo E-bhasikoro iri mune yekukiya modhi, vhiri rinotenderera rinoonekwa uye aramu yekufamba kwevhiri ichagadzirwa. Panguva imwecheteyo, iyo e-bhasikoro haizokiyirwe kana iyo vhiri chiratidzo chinoonekwa.
ACC yakabuda Ipa simba kumutongi. Inotsigira inosvika 2 Kubuda.
Kuonekwa kweACC Chigadzirwa chacho chinotsigira kuonekwa kweAAC zviratidzo. Yechokwadi-nguva yekuonekwa kwesimba remotokari-padunhu.
Kiya mota Chigadzirwa chinotumira kuraira kune mutongi kuti akiye mota.
Buzzer Ichishandiswa kumhanyisa mota kuburikidza neAPP, iyo buzzer inorira beep.
Nhare mbozha inodzora E-bhasikoro Kumisa smart E-bhasikoro mutariri, tsigira nharembozha yekubatanidza kudzora e-bhasikoro kukiya, kuvhura, simba on, tsvaga e-bhasikoro uye zvichingodaro.
433M Remote (sarudzo) Iyo 433M yekudzivirira iri kure inogona kushandiswa kure kure kudzora kukiya, kuvhura, kutanga, uye kutsvaga e-bhasikoro. Kwenguva refu pindurudza kure kudzora bhatani bhatani 1S kuvhura yechigaro kukiya.
Kuonekwa kwesimba kwekunze Bhatiri yemagetsi kuona nekururamisa kwe 0.5V. Inopihwa kune yekumashure senge chiyero cheiyo yekufambisa nzvimbo yee-mabhasikoro.
Chigaro (Seat) zvechizarira Kwenguva refu pfuurira kure kure bhatani bhatani 1s, kiinura chigaro kukiya.
Pamusoro pekumhanya alarm Kana kumhanya kwacho kuchidarika 15km / h, mutungamiriri anotumira chiratidzo chepamusoro padanho, kana chishandiso ichi chiwana chiratidzo ichi, chinoburitsa ruzha rweA 55-62db (A).
Imwe-tinya bhuti basa Tsigira e-bhasikoro kamwe-bhatani kutanga kuona.
Pashure: Kugovera sikuta IOT WD-209
Zvadaro: Maviri-mavhiri Akangwara Chigadzirwa WA-290
Mavhiri Bike Kugovana
Mavhiri Rental Scooter
Mavhiri Scooter Rental
Mavhiri Akagovaniswa Mabhasikoro